Moet & Chandon Nectar Imperial ~ ICT.com.mm
HomeMoet & Chandon Nectar Imperial
Moët & Chandon Nectar Impérial Chardonnay: 20% Pinot Noir: 40% Pinot Meunier: 40% Alcohol: 12.5% Demi-Sec/NV Espernay, Champagne/ France ပြင်သစ်နိုင်ငံထုတ် Moet & Chandon Nectar Imperial ရှန်ပိန် ဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကျော် ဝိုင်နဲ့ ရှန်ပိန်တွေကို ထုတ်လုပ်ရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊... [Learn more]
ပြင်သစ်နိုင်ငံထုတ် Moet & Chandon Nectar Imperial ရှန်ပိန် ဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကျော် ဝိုင်နဲ့ ရှန်ပိန်တွေကို ထုတ်လုပ်ရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ Reims မြို့ Champagne ဒေသကနေ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Champagne Blend ရောစပ်နည်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး အနီရောင်ဝိုင်စပျစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Pinot Noir စပျစ် (40%) ၊ ကမ္ဘာ့လူကြိုက်အများဆုံး အဖြူရောင် ဝိုင်စပျစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Chardonnay စပျစ် (20%) ၊ နက်မှောင်တဲ့အခွံနဲ့ Sparkling ဝိုင်စပျစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Pinot Meunier စပျစ် (40%) တို့ဖြင့် ရောစပ်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အယ်လ်ကိုဟောပါဝင်မှု ၁၂.၅% ရှိတဲ့ Demi-Sec/NV (Sparkling - Sweet and Spritzy) ရှန်ပိန်အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ Demi-Sec ဆိုတာက ရှန်ပိန်တစ်လီတာမှာ သကြားကျန်ရစ်မှု ၃၂ ဂရမ်ကနေ ၅၀ ဂရမ်အထိ ရှိတဲ့ ရှန်ပိန်ဝိုင်တွေကို ခေါ်ဝေါ်တဲ့အမည်ဖြစ်ပါတယ်။ Non Vintage (NV) အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက် အသီးသီးနှစ် မတူတဲ့စပျစ်တွေကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ ဒုတိယနာမည်အကြီးဆုံး Demi-sec ရှန်ပိန်ဝိုင်ဖြစ်ပြီး အစာမစားခင် နှုတ်မြိန်ဆေး (Early Aperitif) အနေနဲ့ သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ လတ်ဆတ်တဲ့ကမာကောင်၊ ကျောက်ပုစွန်၊ ပုစွန်ဆိတ်၊ ယောက်သွား၊ ခုံးကောင်၊ ကဏန်းစတဲ့ အခွံမာပင်လယ်စာဟင်းလျာတွေ၊ ပင်လယ်ကကတစ်ငါးကင်၊ Crab Cake စတဲ့အစားအသောက်တွေနဲ့ လုံးဝတွဲဖက်သင့်တဲ့ ရှန်ပိန်ဖြစ်ပါတယ်။ Aged Gouda သို့မဟုတ် အခြားချိစ်အမာအမျိုးအစားတွေနဲ့လည်း တွဲဖက်သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။
An intense color of bold yellow with green highlight. A rich bouquet and palate of pineapple, mango, Mirabelle plum and apricot withaslight hint of vanilla.
Enjoy as an aperitif or also perfect with fresh oysters, shellfish, crab cakes or grilled Sea bass. Thai curries would elevated the pairing sensations. Aged Gouda or other hard cheeses are perfect cheeses to pair with this beautiful champagne.